Tehirizo ny fanapahan-kevitry ny fahasalamana sy ny taom-baovao amin'ny Savings.Com - Fihenam-bidy ara-batana
Home » Blog » Tehirizo ny fanapaha-kevitra momba ny fahasalamanao sy ny taonanao amin'ny Savings.Com
Amin'ny fiafaran'ny volana Janoary dia tonga ny famaranana ny tolo-dalàna amin'ny taona vaovao. Isika rehetra dia teo izahay: nanomboka ny 2019 ianao tamin'ny taratasy mafonja, nanome toky ny hiasa mafy sy hihinana tsara kokoa ary hamaky boky bebe kokoa. Saingy tampoka, ny volana febroary. Ny fitondrana henjana dia maty, ny fihaonan'ny Super Bowl amin'ny faran'ny herinandro, ary toy izany dia mianjera mivantana any amin'ny sandrin'ny fankasitrahana taloha ianao.
Raha toa mahagaga izany, dia aza manahy. Mbola manam-potoana hiatrehana ny taona tsara indrindra anananao ianao.
Amboary ny tolo-kevitra 2019 ho tanjona mazava.
Ny fikarohana momba ny fahasalamanao sy ny fanatratrarana ny tanjonao dia afaka mandoa ny kitaponao. Vitaminina sy fanafody, sakafo vaovao sy hiditra ao amin'ny toeram-pitsaboana dia manomboka mandany vola, indrindra raha vantany vao nivoaka ireo fampirantiana vaovao.
Mafana ihany koa ny fahatsapana. Ny fiara fitetezam-paritra anao dia mety hanomboka hahatsapa ho toy ny maneso anao, ary mety hanomboka hamoaka vovoka kely ilay fitifirana.
Manana vahaolana vitsivitsy izay hahatonga azy io ho mora kokoa ny hamantatra ny fahatapahan-kevitrareo ary hifikitra amin'ny fahazarana ara-batana vaovao - tsy manimba ny banky.
Andramo ny doka amin'ny zavatra vaovao.
Ny isan-karazany dia ny zavamananaina iainana, araka ny filazany, ary izany koa dia mandeha ho azy ireo koa. Raha manomboka mahatsiaro maivamaivana ny pilina ataonao dia manandrana manova zavatra amin'ny mariazin'ny kickboxing na hot yoga.
Ho gaga ianao hoe inona no mety hiteraka fitakiana vaovao mba hanatsarana ny feon'ny muscle, ary ny sitraponao.
Ahoana àry raha iray amin'ireo mpirotsaka faran'izay mangatsiaka indrindra amin'ny tantara vao haingana? Aza avela hanakana anao tsy hanatratra ny tanjonao ny toetr'andro mahery. Jereo ireto Marihina avy amin'ny marika fiarovana matanjaka ao anaty toy ny MountainWarehouse sy Campmor, izay ahitanao ny paosin'ny skis, tranokely tsy manam-pahataperana na ny palitao atletika mba hitazonana anao hivezivezy, na inona na inona ny vanim-potoana.
Fantaro ny herin'ny smartwatch.
Indraindray, mila fitaovana avy amin'ny teknolojia isika rehetra. Raha toa ka tsy afaka milaza anao fotsiny ny fotoana fohy ny fitaovam-pandinihanao, fa mitazàny ny taham-ponao, ny dingana isan'andro, ny asa aman-draharahanao ary ny fampahatsiahivanao, dia hamporisika ny mpihetsiketsika ianao ary hifantoka amin'ny dianao.
ny Torolàlana momba ny fahasalamana sy fahasalamana dia manome baiko hanombohana ny tanjonao amin'ny 2019 ianao, miaraka amin'ny fitaovana tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra.
Ampidino ny lalao fanatanjahanao.
Tsy ampy ny fitafiana atletika mampientanentana anao? Fiovàna tsotra toy ny fampitomboana ny hazakazaka miaraka amin'ny mpivarotra kiraro vaovao na manampy tafatafa vaovao ho an'ny fihodinanao dia afaka manatsara ny antony manosika anao.
Mialà eo am-pandriana fa aza mitebiteby ary atsofoka ao amin'ny gym. Azonao atao ny mamonjy lehibe amin'ny toetoetranao tsara tarehy ambony, eny fa na dia mitovy bika amin'ny vola aza ianao. Mandrosoa, ento ny mofonao ary hano io koa (tsara, saika).
Fantatrao ve fa ny mozika dia miantraika amin'ny haavon'ny toetranao? Tokony hanomboka ny fiakaranao manodidina ny 120 bpm-mieritreritra an'i "Billie Jean" an'i Michael Jackson-ary avy eo dia manova ny feonao miankina amin'ny asa ataonao, manomboka amin'ny 130-160 bpm mifanaraka amin'ny paosinao.
Ny hira haingana dia afaka manosika anao hikorontan-dava tsy tapaka mandritra ny androm-piainanao isan'andro, fa ny tononkira mahery sy midina dia afaka manampy anao hifantoka amin'ny hery enti-mavesatra sy manangana ny hery fototra. Velomy ny mozikao, avereno ny fisainanao.
Mitady hevitra maromaro kokoa? Savings.com dia manana fifantenana ny tapakila sy ny fanamarihana tsy tapaka mba hamonjena ny poketra, ary ny fanapahan-kevitrao.
Febroary 4, 2019 Admin Blog Tsy asian-teny